November 2015 - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Unknown at 2:58:00 PM 0
Anonymous at 10:34:00 PM 0
Anonymous at 10:30:00 PM 0
Samsung တွေ ကို com port က နေ pattern lock ဖြုတ်လို့ ရတယ် တဲ့ စမ်းကြည့်ကြကွယ်............
Anonymous at 11:01:00 PM 0
Universal Android Tools 2014 ( Test ) Version
Universal_Android_Tools_2014_Version.2014003.rar 3.18 MB
ref:Su Su Tun
Min Oaker at 9:17:00 PM 0
အရင်ဆုံး ကိုယ်ဒေါင်းလုပ်လုပ်မယ့် apk ဆီကို
ok ပြီးရင်တော့ box ကျလာပါလိမ့်မယ်
ကျလာလိမ့်မယ် အဲ့ box ထဲမှာ ခုနက
ထင်ပါတယ် ကျွန်တော့်ရဲ့ post လေးကို အခုလို
Min Oaker at 9:09:00 PM 0
ဒီကောင်လေးကို တင်ရတာ တန်မယ်ထင်ပါတယ်..
ဒါကတော့ ကျနော်တို့ S4 LTE ကို Lolipop ပုံစံနဲ့
1. Download Firmware >>> Here (1.5)GB
2. Download Odin V 3.10.7
3. Download Samsung Ph Driver
ဒေါင်းထားတဲ့ Firmware ဖိုင်ကို Zip ဖြည်လိုက်ပါ.
PDA မှာ ခုနက ကိုယ်ဒေါင်းပီး Zip ဖြည်ချထားတဲ့
Firmware ဖိုင်(xxxxxx.tar.md5) ကို ရွေးပေးလိုက်ပါ.
Coolpad 7060s-s40 firmware .. (rar pass တောင်းထားသူများအတွက်)
Min Oaker at 9:01:00 PM 0
Coolpad 7060s-s40 အရင်ကတင်ထားပေးတုန်းက
pass လိုနေလို့ ဆိုပီးတောင်းထားတဲ့သူတွေအတွက်
pass က virus ကိုက်သွားလို့ ဒေါင်းထားတဲ့သူတွေကို
ဒါကြောင့် သေချာမယ့် လင့်တစ်ခုကနေ
Download : (262.51) MB
Rar pass >>>>> www.sithumobile.com
credit >> > Sithumobile.com
pass ရှိနေလို့ ဖြစ်စေ..အကြံပေးချင်ပါက
My FB Acc >> Min Oke Kar chat box မှ
Anonymous at 9:49:00 AM 0
Anonymous at 9:46:00 AM 0
ဖုန်းနှင့် လုပ်စားနေတဲ့သူများအတွက်ရှိသင်တိုက်တဲ့ - Root Check (Premium) v2.5.1 APK
Mr. Win Hlaing at 6:31:00 PM 0
Anonymous at 10:06:00 PM 0
Online Application များနှင့် Date & Time setting Error
Anonymous at 11:03:00 PM 0
Mobile Phone အသုံးပြုသူတော်တော်များများ သတိမထားမိကြတဲ့ Error လို့ပြောလို့ရတဲ့
Date & Time မမှန်တဲ့အချိန်ဖြစ်တက်တဲ့ Error လေးတစ်ခုကို ပြန်တွေးမိလို့ အကြံပြုပေးလိုက်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်လေ ကျတော့်ကိုမေးတက်ကြပါတယ်။ အကိုကျတော့် viber မှာ ဖုန်းနံပါတ်တွေက viber သုံးတယ်လို့
မပြတော့လို့ပါ။ viber မှာပုံတွေမပေါ်တော့ဘူး။ viber မှာ ရှိတဲ့လူအကုန်လုံးက online တွေပဲ အမြဲတမ်းပြနေတယ်။
Facebook ဆိုရင်လဲ ၀င်လိုက်တိုင်း Connection Error တွေပဲပြနေတယ် လို့မေးလာကြပါတယ်။ အဲဒီလို Error မျိူးတွေ
ကြုံလာပြီဆိုရင်တော့ Setting ထဲကိုသွားပြီး Date & Time Setting ကို ၀င်ကြည့်လိုက်ပါ။ Date & Time Setting မှာ
တနေရာမပာုတ် တနေရာတော့လွဲနေပါပြီ။ Date & Time Setting ကို မှန်ကန်စွာချိန်ပေးခြင်းဖြင့် အပေါ်ကလိုမျိူး
Error တွေနည်းတူ Online Application များနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ Error များကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
Remark >>> တစ်ခါတစ်ရံဖြစ်တက်တဲ့ သတိမထားမိတက်တဲ့ အခုလို Error များကြုံလာရင် အဆင်ပြေစေရန် အကြံပြုပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Android ဖုန်းနှင့် Tablet တွေမှာအသုံးများတဲ့ - Viber v5.6.0.2415 APK
Mr. Win Hlaing at 8:51:00 PM 0
ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ဘ၀အတွက် အသက် ၂၀ ကျော်အရွယ်တွေမှာ လုပ်ရမယ့် ဘ၀နေထိုင်မှုစတိုင်ပြောင်းလဲချက် (၂၀)
Anonymous at 12:11:00 AM 0
၁။ ခရီးထွက်ပါ။ အမှတ်တရနဲ့အတွေ့အကြုံတွေထဲမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ။ မတူညီတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေထဲမှာ နစ်မြှုပ်ပိး မတူညီတဲ့မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆုံဖို့ သင့်အချိန်ကို အသုံးချပါ။
၂။ ဒီအချိန်မှာ ပိုက်ဆံပိုက်ဆံဆိုပြီး ငွေနောက်ကိုချည်း မလိုက်သင့်ပါဘူး။ ငွေကြေးကို ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အနေနဲ့မဟုတ်ဘဲ သင်အလုပ်ကြိုးစားမှုရဲ့ ရလဒ်တစ်ခုအဖြစ်သာသတ်မှတ်ပါ။
၃။ ငွေကြေးစုဆောင်းပါ။ ငွေကို ဘုရင်တစ်ဆူလို မကိုးကွယ်နဲ့ဆိုပေမယ့် ရသမျှအကုန် အလဟဿ ဖြုန်းတီးဖို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ စုဆောင်းတတ်တဲ့အကျင့် ရှိပါစေ။
၄။ တက်တက်ကြွကြွနေပါ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးအတွက်ပါ အလွန်အထောက်အကူပြုပါတယ်။ ထိုင်းမှိုင်းလေးလံမှုကြောင့်ဖြစ်လာမယ့် မလိုလားအပ်တဲ့ရောဂါတွေကို တားဆီးပြီးသား ဖြစ်သွားတာပေါ့။
၅။ သင့်သွားတွေကို ဂရုစိုက်ပါ။
၆။ အရေပြားကိုလည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ။
၇။ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ အစားအသောက် စားသောက်မှုပုံစံကို လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပါ။
၈။ နည်းပညာမြင့်ပစ္စည်းတွေပေါ် မှီခိုတွယ်တာမှုကို လျှော့ချပါ။
၁၀။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ရော တခြားသူတွေကိုပါ ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါ။
၁၁။ ဒရာမာဇာတ်လမ်းတွဲတွေဇာတ်ကားတွေနဲ့ အချိန်မကုန်ပါစေနဲ့။
၁၂။ ရဲရင့်မှုကို တည်ဆောက်ပြီး အကြောက်တရားတွေကို ရင်ဆိုင်ပါ။
၁၃။ အချိန်ကို သေချာစီမံခန့်ခွဲအသုံးချပြီး ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းပါစေ။
၁၄။ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေချမှတ်ပြီး အဓိကနဲ့ သာမညကို ခွဲခြားလုပ်ဆောင်တတ်ပါစေ။
၁၅။ လေ့လာသင်ယူပါ။ လေ့လာသင်ယူပါ။ လေ့လာသင်ယူပါ။
၁၆။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သိဖို့နဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ။ ကိုယ်ဘာလဲ၊ ကိုယ်ဘာလိုချင်လဲ၊ ဘယ်အရာကို ကိုယ့်ကိုပျော်ရွှင်စေလဲဆိုတာကို အဖြေရှာဖို့ ဒီအချိန်က အကောင်းဆုံးပါပဲ။
၁၇။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တခြားသူတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်တာမျိုး အရင်ကလုပ်ခဲ့ရင် အခု ရပ်ပစ်လိုက်ပါ။
၁၈။ အမှားထဲကနေ သင်ခန်းစာယူအမှန်ကိုရှာပါ။
၁၉။ မိတ်ဆွေစစ်မိတ်ဆွေမှန်တွေကို အသိအမှတ်ပြုချီးကျူးပေါင်းသင်းပါ။
၂၀။ အရှိန်လျှော့ဘရိတ်အုပ်ရမယ့် အချိန်ကို သိပါ။ တစ်ချိန်လုံး ဘ၀မှာ ပြေးနေ၊အရှိန်နဲ့သွားမနေဘဲ တစ်ခါတစ်ရံလည်း အရှိန်လျှော့လို့ အနားယူပါ။
Anonymous at 12:10:00 AM 0
Unknown at 10:28:00 AM 0
မင်္ဂလာပါ ဒီနေ့ ပြောချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကတော့ မိမိ G-mail
အကောင့်ရဲ့ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ Start Date ကို ကြည့်တဲ့နည်းလေး
ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းက ဘာတွေအသုံးဝင်သလည်း ဆိုတော့ ကျတော်
တို့ G-mail Account က တစ်စုံတစ်ယောက်က ဟက်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်
မိမိကိုယ်တိုင်ကပဲ မိမိ Password ကိုမေ့သွားတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် လုံးဝင်လို့
မရတော့တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာ ကျတော်တို့က G-mail ကို Recovery
လုပ်ယူကြရပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့ Recovery လုပ်ယူတဲ့အခါမှာ အရေးကြီးတဲ့
အချက်တွေထဲက လုံးဝကို အဓိက ကျတဲ့ အချက်တစ်ခုတော့ G-mail ရဲ့
Start Date ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ပါပုံကို ဖြည့်နိုင်မှ ကျတော်က သို့မဟုတ် Recovery ဆရာကြီးတွေက
(ကျတော်ကတော့ Recovery ဆရာတော့ဟုတ်ပါဖူး… End User လေးတစ်
ယောက်ပါ) ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်မှာပါ။ ဒါကြောင့် ကျတော်တို့က မိမိရဲ့
G-mail ကို ဖွင့်ထားတာတော့ ကြာပြီ၊ ဒါပေမယ့် ဘယ်နေ့ ၊ ဘယ်ရက်၊ ဘယ်လ
ဘယ်နခုနှစ်တုန်းက ဖွင့်ခဲ့တာလည်း ဆိုတာ မမှတ်မျိကြတဲ့လူတွေအတွက်ကို
ပြောပါ့မယ်။ ကဲစကားတွေများနေပြီး အရင်ဆုံး မိမိ ကြည့်ချင်တဲ့ Mail Account
ကို အရင် ၀င်လိုက်ပါ့မယ်။ပြီးသွားရင်တော့
အထက်ပါပုံအတိုင်းမှာ သင့်ရဲ့ Primary Inbox ရှိတဲ့နေရာမှာ မှင်အနီ
၀ိုင်းပြထားတဲ့ နေရာက သင့် မေးလ်ထဲကို ၀င်ထားသမျှတွေကိုဖော်ပြ
ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုလက်ရှိအရဆိုရင် 1-50 of 829 ဆိုတာက
မေးလ် အစောင် ၈၂၉ ထဲကမှ နောက်ဆုံး ၀င်ထားတဲ့နေရာကို အခု
၅၀ စာ ဖော်ပြထားခြင်းကို ဆိုလိုတာပါ။ ဒီတော့ ကျတောတို့က
အဲ့ဒီအပေါ်နားလေးမှာ Pointer လေးကို သွားတင်ပီး မျှားအနီလေး
ပြထားတဲ့ Oldest ဆိုတာကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်။ ဒါဆိုရင်တော့
အထက်ပါပုံအတိုင်းမှာ 801-829 of 829 ဆိုတာဖြစ်သွားပါပြီ။
ဒါဟာ သင့်မေးလ် အစောင် 829 ခုထဲမှာမှ 829 ခုစာကို တစ်ခု
တည်းဖော်ပြထားပေးတာကို ဆိုလိုတာပါ။ ဒီတော့ ကျတော်တို့က
ကျတော်တို့ G-mail အကောင့် စဖွင့်တုန်းက မှတ်မိကြလားမသိဘူး
မိမိ အကောင့်ထဲကို ၀င်လာတဲ့ Gmail Team က ပို့တဲ့ Mail ၃ စောင်
ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ သင့် G-mail ကို စဖွင့်ခဲ့တဲ့ လ၊ ရက်၊ ခုနှစ်
ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ ဒီနည်းလမ်းလေးနဲ့ သင့်မေးလ် အကောင့် ဘယ်တုန်းက
စဖွင့်ခဲ့တာလည်း ဆိုတာကို မှတ်မိအောင် ပြန်လုပ်ထားနိုင်ကြပါစေ…….
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် Account Hack ခံလိုက်ရတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊
Password မေ့သွားတာမျိုးမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် Recovery ပြန်ဆွဲတဲ့အခါ အရမ်း